China Disc Sefa shizha dhisiki firita ine nyeredzi weld Kugadzira uye Fekitori | Hanke
1. Tsvina inofanira kurapwa inopinda muchikamu chesefa kubva panopinda mvura;
2. Mvura inoyerera ichibva kunze kweboka resafa dhisiki ichienda mukati meiyo firita disc reboka;
3. Kana mvura ichiyerera nemukero wakagadzirwa nembabvu dzakaumbwa kunge mhete, zvidimbu zvakakura kupfuura kukwirira kwembabvu zvinonamwa uye zvinochengeterwa munzvimbo yakaumbwa nembabvu dzakakombama uye pakakoromoka pakati pefirifi disc reboka negobvu;
4. Mushure mekusefa, mvura yakachena inopinda mune yakasarudzika dhizaini dhisiki uye inotungamirwa kunze nepaburi.
Iyo firita disc yakaburitswa naAnping Hanke Filter Technology Co, Ltd.chinhu chakakodzera chesefa yekusefa, kuwacha uye nekuomesa michina (inonzi vatatu mune imwe).
Iyo hombe firita yezvinhu iyo firita disc inogadzirwa nemultilayer isina simbi sintered mesh. Iyo chaiyo yekusefa ndeye 1-200μm, iyo dhayamita iri 200-3000mm, uye firita dhisiki dhizaini ine yakakosha uye yakatsemuka mhando.
Hunhu hwefaera disc: kuomarara kwakanaka, simba rakakwirira, refu kutsiva kutenderera, kuchenesa nyore, gungano rakareruka, nezvimwe.
Iyo firita disc inoshandiswa zvakanyanya muvatatu-mu-mumwe uye vaviri-mu-mumwe michina yehupfu kuomesa uye kusefa, kemikari indasitiri, uye chikafu muindasitiri yemishonga, ichitsiva yechinyakare firita jira indasitiri.
Iyo yekusefa mashandiro eiyo firita disc ndeyekuona kusanganiswa kwepamusoro kusefa uye kwakadzika kusefa kuburikidza neakakomberedzwa firita disc. Yayo yepakati tekinoroji ndiyo firita disc, iyo ine seti yeakaviri-mativi polypropylene discs ane grooves munzira dzakasiyana. Madhishi maviri ari padyo akasimudzwa, uye maburi emadziro pane zviso zvakatarisana zvinoumba michinjikwa mizhinji. Mharadzano idzi dzinoumba huwandu hwakawanda hwemakomba uye mapasuru asina kujairika, ayo anogara achidzikira kubva kunze kuenda mukati. Kana ichisefa, idzi ndima dzinotungamira mukufamba kwemvura isina kugadzikana, izvo zvinokonzeresa tsvina mukati memvura kuti ibatwe pamharadzano dzakasiyana. Kana dura remafirita madhizaini akaiswa pamusoro uye akaiswa pafirita yepakati firita, firita yuniti ine yakasununguka yekunze neyemukati yakasimba ichaumbwa pasi pekumanikidza kwechitubu nemvura inouya
Iwo maitiro ekuita kweiyo firita disc:
1. kunyatsoshanda kusefa
2.Modular modularity, kuchengetedza nzvimbo:
3.Kushanda kwakazara otomatiki, kuenderera kwemvura kubuda:
4. Hupenyu hurefu
5. Mhando yepamusoro uye yakaderera kuchengetedza
Muenzaniso D (mm) Sefa nzvimbo R (μm) Sefa midhiya chimiro
Stainless simbi sintered pajira riya
Mufananidzo1: Yakabatanidzwa chimiro: iyo firita ndiro ndiro ine yekutsigira ndiro, uye yega yega sub-unit yakabatana nemabhaudhi.Picture2: Imwe-chidimbu chimiro: iyo firita ndiro yakasungwa kana yakasungirirwa kune yekutsigira ndiro, uyezve yakasunganidzwa kune iyo flangePicture3
Imwe-chidimbu chimiro, iyo firita ndiro yakanatswa sisitered neiyo porous ndiro, uye ndokusunganidzwa kune iyo flange
Pashure: Mhangura mesh yendarira yakarukwa mumatanda
Zvadaro: Emulsion firita yemukaka firita Ine Tri Clamp / Welded / Threaded / flanged Pipe Fittings
Bhatani Filter Disc
Disc Filter Chinhu
Leaf Disc Filter Chinovhara
Plastiki Extruder Firita Disc
Polymer Shizha Dhizaina Filter
Yega Yekuchenesa Disc Firita
Stailess Simbi Sefa Disc
Perforated chubhu punchi chubhu firita ne mutsa ...
Wedge waya chinovhara firita slots Sefa mutopota musoro ...
Sintered Sefa eremendi kenduru firita yakakwira effi ...